राष्ट्र बैंकद्वारा ३ खर्ब ३ अर्बभन्दा बढी तरलता प्रशोचन - Arthakoartha.com
काठमाडौं, २ वैशाख । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी ३ खर्ब ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सो अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत रू. १ खर्ब ९ अर्ब ५४ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत रू.१ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड गरी कुल उक्त परिमाणमा तरलता प्रशोचन गरेको हो ।
बैंकले सोही अवधिमा तरलता सुविधामार्फत रू. २ अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत रू. २८ अर्ब र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत रू. ३० अर्ब गरी कुल रू. ५८ अर्ब तरलता प्रशोचन भएको थियो भने रिपोमार्फत रू. ११३ अर्ब ९९ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रू. ६९ अर्ब ५५ करोड गरी कुल रू. १ खर्ब ८३ अर्ब ५४ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरु) बाट अमेरिकी डलर २ अर्ब ४३ करोड खुद खरिद गरी रू. २ खर्ब ८६ अर्ब ६८ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर २ अर्ब ४९ करोड खुद खरिद गरी रु.२८५ अर्ब १८ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो । सो अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब ८४ करोड बिक्री गरी रू. ३ खर्ब ३४ अर्ब ६५ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब ७८ करोड विक्री गरी रू. ३ खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको थियो ।
जीवन रक्षा र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान बजेटको प्रमुख लक्ष्य
राष्ट्र बैंकले १२ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने